Qalabka luuqadda gobolka, qalabka luuqada miyiga, qalabka luuqadaha laga tirada badan yahay.
URL-yada website-yada waxay ku qoran yihiin Ingiriis. Sidaa darteed, dadka aan Ingiriisiga ahayn, dadka reer miyiga ah iyo kuwa gobolkuba ma furi karaan boggaga internetka. Qalabkeena luqadda ayaa ah midka ugu fiican ee loogu talagalay iyaga.
1. Isticmaalayaasha luqadda ee gobolku waxay heli doonaan bogga internetka iyagoo caawimaya cidkasta oo keliya